Wacyigelinta dhallinyarada ee ka hortagga dembiyada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Cali Yasin Gurbe, guddoomiyaha ururka Somali dialogue center ee magaalada Göteborg. sawir: Kenadid Mohamed/SR
Wacyigelinta dhallinyarada ee ka hortagga dembiyada
La daabacay måndag 8 oktober 2018 kl 16.59
Magaalada Göteborg waxaa dhowaantan ka bilowday qaybtii saddexaad, ahna qaybtii ugu dambeeysay ee mashruuc saddex sannadood loogu talo galey.
Midkaasina oo biloowday gabagabadii sannadkii 2016, soconna doona illaa iyo septeembar sannadka 2019, sida uu sheegay guddoomiyaha ururka xarunta dhexe ee wada hadalka soomaalida – afka iswiidhishkana lagu yiraahdo Somali Dailog Center, Cali Yaasiin Gurbe, mar aannu kula kullanney magaalada Göteborg.
Mashruuca ”Unga mentorer och dailogue möte” oo macnihiisu yahay – wada xaajoodka iyo dhabba tuseyaasha da’da yar ayaa guulo fiican laga gaarey labadii tallaabo ee midkiisii ugu dambeeyey la soo gabagabeeyey, iminkana la guda geli doono tallaabadii saddexaad.
Mashruucan oo ka shaqeeya meediyada iyo barnaamijyo la xiriira ayaa loogu talo galey sidii dhallinyarada loogu tababari lahaa wada hadalka, isla markaana loo ba ri lahaa sidii ey tusaale ugu noqon lahaayeen dhqallinyarada dhiggooda iyo bulshada kale dhammaanteed, sida uu sheegay Cali Yaasiin Gurbe, guddoomiyaha ururka somali dialog center.
Dhallinyarada qaybta ka ah mashruuca ayaa loo qabtaa kulammo lagu casumo khubaro leh culuun kala duwan, sidii ey uga heli lahaayeen waayo aragnimo iyo aqoon ku dayasho mudan, sida uu sheegay.